के हो #मिटु? - खबरम्यागजिन
Homeखबरके हो #मिटु?
सायद कमैले सोचेका थिए होलान्, मि टु अभियानले यो सफलता पाउला भन्ने। हेर्दाहेर्दै अमेरिकाबाट फैलिएको आगो संसारभर फैलियो।
२०१७ को अक्टोबरदेखि सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको थियो, मि टु ह्यासट्याग। यौन दुर्व्यवहार आलोचना गर्दै महिलाले यो अभियान चलाएका थिए। एक वर्षपहिले फिल्म प्रोड्युसर हार्वे वेन्स्टाइनलाई यौन हिंसाको आरोप लगाउँदै फेसबुक÷ट्विटरमा आलोचना गरियो। ५ अक्टोबर २०१७ मा न्युयोर्क टाइम्सले लेख्यो, ‘दुई दशकअघि हार्वेले एस्ली जडलाई पेनिन्सुला बेभेर्ली हिल्स होटेल’ मा बोलाए। एस्लीलाई लाग्यो, ब्रेकफास्टका लागि बोलाए होलान्। तर, कोठामा लगेर उनले आफूलाई मालिस गर्न अह्राएको, बाथरुममा हिँड्न कर गरेको एस्लीले आफ्नो अन्तर्वार्ताका क्रममा बताइन्।’ वेनस्टाइनलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाउने एस्ली एकमात्र महिला थिइनन्।
नायिका एलिसा मिलानोले यौन हिंसाको सिकार भएकाहरूले ह्यासट्याग मि टु लेखेर यसका विरुद्धमा आवाज उठाउन आग्रह गरेपछि यो आन्दोलनले उचाइ ग्रहण गर्दै गयो। मि टु आन्दोलनले कर्तुत खुलाएका केही उच्च पदस्थहरूः
१) जर्ज डब्लू बुस
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बुसले नायिका हिथर लिन्डालाई केही वर्षपहिले अनुचित मनशाय राखेर छोएको आरोप खेप्नुप¥यो। अन्तमा उनले २४ अक्टोबरका दिन माफी मागे।
२) लेस मुन्भ्स
सीबीएस कर्पाेरेसनका कार्यकारी प्रमुख लेसलाई ६ जना महिलाले उनलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाए। न्युयोर्क टाइम्सले उनीमाथि अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाएको थियो। लेसले १९८० देखि २००० सम्ममा ६ जना महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ।
३) मोग्र्यान फ्रिम्यान
एकेडेमिक अवार्ड विनर मोग्र्यानका बारेमा सीएनएनले २४ मे २०१८ मा रिपोर्ट सार्वजनिक ग¥यो। फ्रिम्यान प्रोडक्सन हाउसमा काम गर्ने महिलालाई उनले यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाइयो।
४) रिचार्ड मियर
न्युयोर्क टाइम्सले १३ मार्च २०१८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार पाँच जना महिलाले आर्किटेक्ट रिचार्डलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाए। ८३ वर्षीय मियरले भनेका छन्, ‘मेरो क्रियाकलापले जजसलाई असर परेको छ, उनीहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु।’
५) चक क्लोज
आर्टिस्ट क्लोजको कर्तुत त्यतिबेला खुल्यो, जब न्युयोर्क टाइम्स र हफ पोस्टले २०१७ डिसेम्बरमा उनको यौन दुव्र्यवहारलाई सार्वजनिक गरे। उनले एकजना महिलालाई जबर्जस्ती कपडा खोल्न लगाए तर युवती भाग्न खोजिन्। दुई सय डलर दिने प्रस्ताव क्लोजले युवती समक्ष राखेका थिए।-अन्नपूर्ण